उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरुमा आग्रह !! – Dhukdhuki fm
उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरुमा आग्रह !!
in जनसरोकार / राष्ट्रिय खबर / समाज / सर्लाही बिशेष — by admin —	January 13, 2018
सर्लाही, पौष २९ – सर्लाहीको लालबन्दी स्थित ढुकढुकी एफ.एम.को प्रांगणमा आज शनिवार साहित्यिक जमघट एवम रचना वाचन कार्यक्रम हुँदैछ । सर्ला्हि साहित्य समाज र ढुकढुकी एफ.एम. को संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम हुन लागेको हो ।
समाज र रेडियो को संयुक्त आयोजनामा हरेक महिनाको अन्तिम शनिवार कार्यक्रम गर्ने कार्यतालीका अनुसार नै पौष २९ गत्ते कार्यक्रम गर्न लागीएको हो ।
कार्यक्रम ढुकढुकी एफ.एम.को प्रांगणमा मध्यान्ह १२ बजेबाट हुने छ । जिल्ला भित्र तथा बाहिर रहनुभएका सम्पुर्ण साहित्यमा रुचि राख्नुहुने महानुभावहरुलाई उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भईदिन सर्ला्हि साहित्य समाज र ढुकढुकी एफ.एम.ले अनुरोध गरेको छ ।
आजको कार्यक्रममा सर्लाही लालबन्दीका सर्जक महेश थापाको नयाँ कृति नमोनमः को बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने बताईएको छ ।